Hebrio 9 - Ny Baiboly
Hebrio toko 9
Nalemy loatra ny fomba tamin'ny Lalàna fahiny - Ambony lavitra noho izany ny sorona natolotry ny Kirsty - Nilaina tokoa ny fahafatesan'ny Kristy - Manan-kasina mandrakizay ny soron'ny Kristy.
1Ny fanekena voalohany koa àry dia nasiana fitsipika momba ny fanompoam-pivavahana, sy ny fitoerana masina momba ny ety an-tany. 2Fa nisy tranolay natao, ka ny efitra voalohany, izay atao hoe fitoerana masina, dia nisy ny fanaovan-jiro maro rantsana, sy ny latabatra, ary ny mofo alahatra. 3Ary ny efitra lamba faharoa kosa, izay atao hoe fitoerana masina indrindra, dia izao no zavatra tao anatiny: 4ny otely volamena fandoroana emboka manitra, ny fiaran'ny fanekena voasarona volamena avokoa, izay nisy ny siny volamena nitoeran'ny mana, sy ny tehin'i Aarona izay nitsimoka, ary ny vato fisaka nisy ny fanekena. 5Nisy Kerobimam-boninahitra teo amboniny, izay nandrakotra ny fanaovam-panavotana tamin'ny alony. Fa tsy azo visavisaina eto avokoa ny andinidinik'izany.
6Nony voalamina araka izany ireo zavatra ireo, dia tao amin'ilay voalohany amin'ny tranolay ihany no nidiran'ny mpisorona mandrakariva, raha nanao ny fanompoam-pivavahana izy; 7fa tamin'ilay faharoa kosa, dia ny mpisorombe irery no niditra tao indray mandeha isan-taona, sady nitondra rà izay natolony noho ny hadisoan'ny tenany sy ny an'ny vahoaka koa. 8Ambaran'ny Fanahy Masina amin'izany fa tsy mbola naseho ny làlana mankany amin'ny toerana masina indrindra, raha mbola ao koa ny tranolay voalohany. 9Ary fanoharana tandrifin'ny andro ankehitriny izany, izay manambara fa ny fanatitra aman-tsorona natolotra fahizàny, dia tsy nahalavorary izay nanolotra azy, raha ny ao am-po no heverina, 10fa naman'ny hanina, sy fisotro ary fidiovana samihafa fotsiny, dia fitsipika momba ny nofo ihany, ary voadidy ambara-pihavin'ny andro fanoloana azy ihany.
11Fa ny Kristy kosa, nony efa tonga ho Mpisorombe ny amin'ny soa ho avy, dia namaky tranolay tsara lavitra sy lavorary lavitra, tsy nataon-tànana, izany hoe tsy mba anisan'izao zava-boary izao; 12sady tsy mba ran'osilahy na ran-janak'omby, fa ny ran'ny tenany no nentiny niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra, indray mandeha monja dia ampy, ka nahazoany fanavotana mandrakizay. 13Ary raha ny ran'osilahy sy ny ran-janak'omby aza mbamin'ny famafazana ny lavenom-bantotr'ombivavy nanamasina izay voaloto amin'ny fanadiovana ny nofo, 14mainka ny ran'ny Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manan-tsiny tamin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny Fanahy mandrakizay, no hanadio ny fontsika ho afaka amin'ny asa maty, mba hanompoantsika an'Andriamanitra velona!
15Noho izany, dia Mpanalàlana amin'ny fanekena vaovao izy, mba hahazoan'izay voantso ny lova mandrakizay nampanantenaina azy, rahefa nisy fahafatesana hanalana ny fahotana natao tamin'ny fanekena taloha. 16Satria amin'ny didim-pananana dia ilaina ny fahafatesan'ny mpandidy; 17tsy manan-kery moa ny didim-pananana afa-tsy amin'ny fahafatesana ihany; fa tsy miasa izy raha mbola velona koa ny mpandidy. 18Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy fandatsahan-drà koa. 19Fa rahefa voavakin'i Moizy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra tao amin'ny Lalàna, dia nalainy ny ran-janak'omby sy ny ran'osilahy, mbamin'ny rano sy ny volon'ondry mena ary ny hisopy, ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra, 20ary hoy izy: Ity no ran'ny fanekena nataon'Andriamanitra taminareo. 21Dia nofafazany ra toy izany koa ny tranolay mbamin'ny fanaka rehetra enti-manao raharaham-pivavahana. 22Fa araka ny Lalàna dia saika diovina amin'ny ra avokoa ny zavatra rehetra; ary tsy misy famelan-keloka raha tsy misy ra alatsaka.
23Koa raha ny tandindon'ny zavatra any an-danitra no tsy maintsy ho nodiovina toy izany, mainka sorona tsara lavitra noho ireny no tsy maintsy nanamasinana ny tenan'ny zavatra any an-danitra. 24Fa tsy mba fitoerana masina nataon-tànana sy tandindon'ny tena izy fotsiny no nidiran'ny Kristy, fa tany an-danitra mihitsy, mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika ankehitriny. 25Ary tsy mba toy ny mpisorombe niditra isan-taona tao amin'ny fitoerana masina sy nitondra ran-javatra hafa izy, ka hoe hanolo-tena matetika; 26raha izany dia ho nijaly matetika izy hatrizay nanaovana izao tontolo izao; fa indray mandeha monja izy no niseho tamin'izao andro farany izao, mba hamongotra ny fahotana tamin'ny nanolorany ny tenany ho sorona. 27Ary toy ny nandraiketana ny olona ho faty indray mandeha sy hotsaraina rahefa afaka izany 28no nanoloran'ny Kristy ny tenany indray mandeha koa mba hanala ny fahotan'ny maro, sy mbola hisehoany tsy amin'ota fanindroany mba hamonjy izay miandry azy. >